Hoy Ejipta : “Tsy Fanonganam-panjakana io” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 07 Jolay 2013 10:34 GMT
Vakio amin'ny teny Español, বাংলা, Français, Català, Swahili, srpski, فارسی, polski, English
Ity lahatsoratra ity ampahany amin'ny lahatsoratray manokana mikasika ny Fanalan'ireo Ejiptiana an'i Morsi
Ny fitsabahan'i Etazonia amin'ny raharahan'ny Ejiptiana – sy ny resaka resahan'ny filazam-baovao anaty aterineto, indrindra ny CNN, mikasika ny fivoarana ara-politika ao Ejipta – no namaivay be ny alina lasa teo. Nahitàna fankalazana nanerana ny firenena ny fanalàna ilay filoham-pirenena Mohamed Morsi taorian'ny herintaona nitondràny, teo ihany koa ny andianà herisetra nifanaovan'ireo mpanohana sy mpanohitra an'i Morsi.
Maro ihany koa no tezitra tamin'ny fitsabahan'ny Etazonia amin'ny raharahan'nyi Ejiptiana. Nilaza izy ireo fa toy ny tsy nahafantatra ny fisian'ireo vahoaka izay nidina an-dalàmbe nitaky ny fahafahana ilay “fanambarana feno fihatsiana” nataon'ny filohan'i Etazonia Barak Obama, fa kosa nanofahofa ny karatra fanampiana ho azy ireo. Toy izao ilay fanambaran'i Etazonia, nivoaka ny 03 Jolay :
@ :CNN nipoaka ny herisetra satria manameloka ilay fanonganam-panjakana ireo mpanohana an'i Morsy http://on.cnn.com/11nnpPL
@Waelucination Hetsika feno filaminana ? Ajanony hatreo ny lainga @CNN pic.twitter.com/y9AamNfKXF
Ilay hetsiky ny Firahalahiana Silamo “feno filaminana “. Nanamafy i @Waelucination fa mandainga ny CNN amin'ny filazany ny ataon'ireo mpanao hetsi-panoherana manohana an'i Morsy. Ity sary ity dia mampiseho olona anatin'ireo mpanao fihetsiketsehana mitondra basy
@WilloEgy 33 tapitrisa ireo vahoaka nidina an-dalàmbe nitaky ny fialàn'i #Morsi kanefa mbola antsoinao hoe fanonganam-panjakana ihany ve izany ? Tena inianao disoina ny zava-misy an.
@A_M_Sabry #tsy nifidy an'i #Obama velively hitondra an'i #Ejipta .. araka ny fiheverako #MindYourBusinessUS (#NyAferanareoAtrehanaRyEtazonia)
Tao amin'ilay lahatsoratra nosoratany, nampitondrainy ny lohateny hoe 30 Jona : The Real Deal,(Ny Tena Ady) nilaza i Yusra Badr fa nanakàna ny firenena Ejiptiana tsy hanao ny fankalazana izay efa nandrasany hatry ny ela ny taona iray nitondran'ny Firahalahiana Silamo ary nanova izany ho fisaonana. Hoy izy nanampy hoe :